Tropicana oroma ihe ọiceụiceụ ezigbo 1.6 Liter | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tropicana oroma ihe ọiceụiceụ ire ụtọ 1.6 Litre– Ordrs
Tropicana oroma ihe ọiceụiceụ ezigbo 1.6 Liter
Ezigbo Mịrị ihe ọ Juụ Juụ
Nwee Tropicana dị ka akụkụ nke nri dịgasị iche na nke ziri ezi na ibi ndụ dị mma.
- icioustọ Tropicana Ezigbo Mmanya oroma ihe ọ noụ noụ na-enweghị bits gụnyere ka 100% mkpụrụ osisi dị ọcha
- Ọ bụghị site na itinye uche, Tropicana nwere naanị ihe ọ juụ juụ dị ọcha na ihe dị ọcha
- Ihe ọ bụla na-enye 150ml nwere 45% nke vitamin C a na-atụ aro kwa ụbọchị, nke na-eme ka mbelata ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ
- Naanị otu ihe ọ ofụ ofụ ihe ọ juiceụ juiceụ na-enye 1 nke 5 mkpụrụ ụbọchị na mkpụrụ osisi
- Bilie ma nwuo na iko nke Tropicana na nri ụtụtụ
Anyị na-eme ihe ọ juiceụ juiceụ ruo ihe karịrị afọ 70 ma ka na-ewetakwa otu agụụ ahụ na usoro ahụ dị ka mgbe mbụ anyị malitere. Akụkọ Tropicana malitere na Anthony T. Rossi, onye rutere US na naanị $ 25 n’akpa ya. Ọ tọrọ ntọala Tropicana na 1947 na ebumnuche nke ime ka ịdị mma nke mkpụrụ kacha mma nwee ike ịnweta mmadụ niile. N’agbanyeghi otu o siri sie gi ike, igaghi achota ihe obula ma nkpuru osisi di ocha 100%, akwukwo nri na vitamin n’ime ihe ojoo. Anyị anaghị etinye shuga, yabụ ị ga-ejide n'aka na ihe ụtọ ahụ niile bụ 100% ọcha na eke, kwụ ọtọ site na mkpụrụ osisi ahụ, ma were 1 nke 5 gị kwa ụbọchị.
Na Tropicana ihe mmiri na-atụ anyị ụjọ. Anyị na-akwalikwa ọchịchọ nke iwepụta nri na-edozi ahụ nye onye ọ bụla na-a Tụ Tropicana. You gbalịrị ọhụrụ Tropicana Essentials nso? Ihe omuma ndi ozo di na Tropicana juputara na nkpuru osisi, vitamin na veg-ekpomeekpo obula eji aru ike gi na aru ike gi n’uche.
100% mkpụrụ osisi dị ọcha
Ngwugwu nha: 1600ml
Vitamin C nke na - eme ka mbelata nke ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ